व्यवसायमा युवा 'बायोफ्लेक्स' प्रविधिमा माछापालन हरिजन र पौडेलले २३ रोपनी जमिन २० वर्षको लागि भाडामा लिएर व्यवसाय शुरु गर्नुभएको हो । गोलाकार ढलान गरिएको जालीमा प्लास्टिक पोखरी बनाएर पानी भरिएको छ । युरोप र जापान जस्ता मुलुकहरुमा यस्तो माछापालन निकै लोकप्रिय बनेको लगानीकर्ता दुर्गा पौडेलले बताउनुभयो । आईतबार, कात्तिक १७, २०७६
गरिमा धान रोपेका किसानले क्षतिपूर्ति पाउने शनिबार, कात्तिक १६, २०७६ अघिल्लो बर्ष रौतहट, बारा, पर्सा लगायत तराइका जिल्लामा लगाईएको मकैबालीमा पनि घोगा नलाग्ने समस्या भएको थियो । यस्ता समस्या बारम्बार भएपछि नेपालमा बीउ बिजनको खरिद विक्रि कसरी भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
खेर जान्छ, दैनिक डेढ करोडको बिगौति दुध बुधबार, कात्तिक ६, २०७६ पर्वत । एक लिटर दूधको मुल्य ७० राखेर हिसाब गर्ने हो भने दैनिक १ करोड ६० लाखको बिगौती दूधले मुल्य नपाएको देखिन्छ ।
कृषि पढेरै कृषिमा १८ घण्टा तारालाई बिहान उठेदेखि साँझ नपरुन्जेलसम्म कामबाट फुर्सद हुँदैन । स्याङ्तानले व्यावसायिक रुपमा कृषि थालेको ६ वर्ष भयो । ०७१ सालमा रोपेको किवी अहिले फल्न थालेको छ । ५० रोपनी जग्गामा ६ सय ५० बोट किवी छ ।
फौजी किराले बाली सखाप,भोकमरीको चिन्ता शुक्रबार, भदौ २७, २०७६ लामो खडेरी पछि यस क्षेत्रमा किसानले मकै रोपेका थिए । मकैका बिरुवा राम्रोसँग सप्रिएको थियो । तर गोड्ने बेलामा मकैको बोटै किराले खाएपछि, किसानहरुमा अनिकालको चिन्ता छ । प्रकोप क्षेत्रका किसानले दक्ष कृषि प्राविधिक नआएको गुनासो गरेका छन् ।
ग्राहक बटुल्दै ओख्रेनीको गान्टे मुला २ घण्टा उपभोक्ताले निकै रुचाएको लेकाली आलु र गान्टे मुलाको बजारिकरण र व्यावसायिक खेतिका लागि नगरपालिकाले योजना समेत बनाएको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङले बताउनुभयो ।
माछा पालन व्यवसायमा गोलन्जोरका युवा आईतबार, भदौ १, २०७६ सिन्धुलीमा विपी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग सञ्चालन भएसँगै ग्वाल्टार, खुर्कोट, खाल्टे, मुल्कोट, नेपालथोक लगाएत यस सडक आसपास अहिले थुप्रै होटल सञ्चालनमा छन् । यस्ता होटलमा तराई र भारतबाट ल्याइएको माछा पाक्ने गरेको छ । तर ग्वाल्टारमा गरिएको माछा पालन व्यवसायले बाहिरबाट आयात गरिने माछा प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
रासायनिक मल बिनै मनग्गे उत्पादन आईतबार, भदौ १, २०७६ यहाँका अधिकांश किसान गाई भैंसी पाल्छन् । उनीहरुले बालीनालीमा गाईभैंसीको मल प्रयोग गर्छन् । कतिपय किसानले झारपातलाई कुहाएर बनाईएको कम्पोष्ट मल प्रयोग गरिरहेका छन् । रासायनिक मल प्रयोग गरेर उत्पादन भएको तरकारी भन्दा यो तरकारी स्वादिष्ट हुने किसानहरु बताउँछन् ।
यो वर्ष धान उत्पादन घट्ने बिहिबार, साउन २३, २०७६ साउन महिनाभरी धान रोंपाई हुने भएकाले सरकार, तथ्याङ्क बढ्ने आशामा छ । तर समय घर्किएपछि रोपिएको धानले राम्रो उत्पादन नदिने कृषि विज्ञ बताउँछन् । सरकारी अधिकारी पनि धान उत्पादन घट्ने बताईरहेका छन् । तर कति उत्पादन घट्छ भनेर अध्ययन भने भइसकेको छैन ।
सरकारकै अनुदानमा चक्लाबन्दी खेती सुरु सोमबार, साउन २०, २०७६ नमूना कृषि कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले ४८ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
आकाशे पानी संकलनमा तीनै तहका सरकार सोमबार, साउन २०, २०७६ नेपालमा वर्षेनी औसत १५ सय मिलिलिटर पानी पर्ने गरेको छ । जसमा २० प्रतिशत पानी खेर जाने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आकाशे पानी संकलन गर्न सके धेरै किसानलाई व्यवसायिक खेतिमा आकर्षित गर्न सकिने कृषिविज्ञहरु बताउँछन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तह पकेट क्षेत्र घोषणा हुँदै बुधबार, साउन ८, २०७६ बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी र अछाम सुन्तला जातका फलफूल राम्रोसँग उत्पादन हुने क्षेत्र हो । कागति, अनार, सुन्तला लगाएतका फलफूल लगाउने हो भने किसानहरुले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने कृषि प्राविधिक बताउँछन् ।
उत्पादनदेखि बजारसम्म किसानलाई समस्या आईतबार, साउन ५, २०७६ मुस्ताङमा वर्षेनी ५३ सय मेट्रिक टन स्याउ फलेपनि यातायातको सुविधा नहुँदा किसानले समस्या भोगिरहेका छन् । तराईमा सिंचाइको सुविधा र मलको अभावले धान उत्पादन कम हुन थालेको छ । जसले गर्दा आफूहरु निरुत्साहित भएको धनुषाका किसान भरत महतोको भनाइ छ ।
प्राविधिक अलमलमा, सरकार छलफलमा बिहिबार, असार २६, २०७६ अघिल्लो वर्षको भदौमा स्थानीय तहहरुलाई पत्र लेखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक गाविस एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह ग¥यो । उनीहरुको तलबभत्ता ससर्त अनुदानमा पठाइने भएपछि स्थानीय तहले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै प्राविधिक खटाए ।
आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्दैनन् किसान बुधबार, असार २५, २०७६ सरकारको तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । तर कृषिबाट जीवन धान्न नसकिएको भन्दै विकल्प रोज्नेक्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । लागत मूल्य र नाफाको विषयमा ध्यान दिने हो भने कृषिबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने कृषि विज्ञहरु बताउँछन् ।
खडेरीले पूर्वी पहाडी जिल्लाका खेत बाँझै सोमबार, असार २३, २०७६ सिँचाई सुविधा नभएका बस्तीका किसानले आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । रुम्जाटारका खड्ग कुमारी दाहाल वर्षा नभएपनि खेत सबै बाँझै रहेको दुखेसो सुनाउनुहुन्छ ।
दश लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिंचाई सुविधा आईतबार, असार २२, २०७६ झन्डै साढे २६ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको नेपालमा १७ लाख ६६ हजार हेक्टर सिंचाई योग्य जमिन छ । सरकारको पहलमा सुरु भएको सिँचाईको इतिहास हेर्ने हो भने ९६ वर्षमा १० लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिंचाई पुगेको छ ।
कृषिमा बजेट ३४ अर्ब ८० करोड, खै किसानलाई पेन्सन ? बिहिबार, जेठ १६, २०७६ सबै प्रदेशमा नमूना अर्गानिक प्लान्ट स्थापनामा बजेटले जोड दिएको छ । खाद्य गुणस्तर केन्द्र स्थापना गर्ने बिषय पनि बजेटमा समावेश छ । किसानलाई तत्कालै परामर्शका लागि कल सेन्टर स्थापना गर्नेदेखि जडिबुटी खेतीको प्राथामिकता पनि बजेटमा उल्लेख छ ।